Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Myanmar (Burma) is increasingly persecuting religious ethnic minorities, particularly Christians and Muslims.
at 4/20/2018 09:30:00 PM
ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ကေအုိုင်အေ) ၏ တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ၊ တပ်ရင်း (၁၁) အား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လေကြောင်းပစ်ကူနှင့်အတူ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေသောကြောင့် မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ နမ္မတီးကျေးရွာအနီးရှိ ကဆုန့်ကျေးရွာတွင်နေထိုင်နေကြသော ဒေသခံပြည်သူများ အသက်ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးနေရသောဗွီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။
Click on link vedeo https://www.facebook.com/NlamHkunAwng/videos
Arrest and torture of Kachin civilians ongoing says UN's
Kachin Pastors Sentenced for Unlawful Association
Labels: Analysis, announcement, Article, Bible
Thousands flee conflict in Myanmar's Kachin state ...
လူမျိုးရေ အနု အကြမ်း သတ်နေကြတာ ဆန်ဒ ပြေ
ကချ့င်စစ်ဘေးရှောင်များ တားဆီးပိတ်ပင်မှု ကန်ကွက်ဆန္ဒြ...
HPA NSENG AI, NGA AI NI KATUT SHA NA RE.
“expend” or “expended” ngu ai tinnang rawt galu ka...
Kachin IDPs should come down to Yangon
Yangon de refugee sada ya ra
ကချင်ကိုမုန်းသော ဗမာအချို့ နဲ့ ဗမာစစ်တပ်အသိုင်းအဝိ...
ဆွမ်ပရာဘွမ်-အင်ဂျန်းယန်နယ်မြေ စစ်ဆင်ရေးမှာ မအလ စစ်...
I feel helpless': Abuses plague Myanmar's Kachin c...
The Voice of the Hidden Kachin Conflict From the O...
တပ်မတော်ကို ICC တင်ဖို့ ကချင်အရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၃၂ ဖွဲ့ ...
In northern Myanmar, forgotten Kachin conflict int...
While world watches Rohingya crisis, Burma Christi...
Land of Jade turns Land of Mines
Fleeing Kachin face food, medicine shortage amid M...
Nearly 2000 civilians trapped in Kachin fighting p...
More actions being taken against Myanmar, says US ...
Myanmar (Burma) is increasingly persecuting religi...
Si tim mung dan matu tai, Hkrung tim mung dan matu...
kang hpoi.shayaw goi ,ning chyin,Kabung hte shagra...
Rev.Dr. Lahtaw Gum Se aq Ahtik Labau , Rev. Dr. La...
Genocide နဲ့ စှဲခကျြတငျပီး အပွဈပေးခဲ့ပါတယျ
တနိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ အောင်လော့ဒ်ရွာကို မြစ်ြ...
တပ်​မ​တော်​ မှ ဗုံးကြဲ ၍ ​အောင်​​လော့ ​ကျေးရွာ မီ...
ပင်လုံစာချုပ်မူကို ရရှိရေးအတွက် တိုက်နေတာပဲ
မြန်မာ့ရိုးရာရေကစားမဏ္ဍပ် ( Hukawng Tanai ,Kachin st...